Shirkad Turki ah oo heshay heshiis lagu sahaminayo Dahab iyo macdan dalka Sudan… – Hagaag.com
Shirkad Turki ah oo heshay heshiis lagu sahaminayo Dahab iyo macdan dalka Sudan…
Posted on 24 Nofeembar 2018 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
War ka soo baxay Wasaarada Batroolka ee Sudan ayaa sheegaya in Sudan ay heshiis la saxiixatay shirkad Turki ah oo ay leedahay dowlada oo u ogolaaneysa in ay sahamiso dahabka iyo macdanta kale ee ku jira gobolka Badda Cas ee Bariga Sudan.
Ilo ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in heshiiska u dhexeeyo Hay’ada Guud ee daraaseynta Geology-ga oo taabacsan wasaarada Shidaalka iyo mid mataleysa shirkada Turkiga ee sahaminta dahabka iyo macdanta ayaa sahan ka bilaabi doona Gobolka Badda Cas.
Heshiiska ayaa ku soo beegmay maalin ka dib markii uu Madaxweyne ku xigeenka Turkiga uu dhameystay booqasho rasmi ah oo seddax maalmood uu ku joogay dalka Sudan.
Dhaqaalaha Sudan ayaa maraya dhibaatooyin tan iyo markii ay ka go’day Koonfurta Sudan sanadkii 2011, oo markaasi la tagtay inta badan dhulkii laga soo saari jiray saliida oo ka soo xaroon jirtay dhaqaalaha dalka lagu waday. Wax soo saarka Sudan ee dahabka ayaa sanadkii hore gaaray 105 ton.
Sidoo kale waxaa si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha lacagta pound Sudan bishii October, sidoo kale waxaa la xadiday lacagaha lagala bixi karo bankiyada.